Akụkọ - Otu esi ahọpụta ihe nzacha na ntanetị
Etu ị ga-esi họrọ nzacha tankị dị mma
E jiri ya tụnyere gburugburu ebe obibi, njupụta nke azụ dị na akwarium buru oke ibu, ma azụ azụ na nri fọdụrụ karịa. Ihe ndị a na-emebi ma hapụ amonia, nke kachasị emerụ azụ. Ka ihe na-abaghị uru, a na-emepụtakwu amonia, na ngwa ngwa ogo mmiri na-adị. Ihe nzacha ahụ nwere ike ime ka mmetọ mmiri dị ọcha site na nsị ma ọ bụ ihe idide azụ, ma mee ka ikuku oxygen dị na mmiri dịkwuo elu. Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị na-enweghị ike na-efu na usoro nri.
Ihe nzacha elu dị n'elu pụtara n'ụzọ nkịtị usoro nzacha n'elu tank azụ, nke bụkwa eziokwu.
Ọchịchị na-arụ ọrụ nke nzacha elu bụ na a ga-agbanye mgbapụta mmiri n'ime tankị nzacha, wee laghachi azụ na azụ azụ site n'ụdị dị iche iche nke ihe nza na ncha ncha. Mgbe ahụ, ọ na-asọghachi azụ azụ site na ọkpọkọ ntanetụ na ala.
Uru na nzacha
1. Ọnụ ego dị ọnụ ala
2. Nlekọta dị mma kwa ụbọchị
3. Mmetụta filtration anụ ahụ dị ezigbo mma
4. Ọ dịghị mkpa maka oghere dị iche
Enweghị elu nyo
1. Contactkpọtụrụ ikuku ọzọ, carbon dioxide dị mfe ịlafu
2. Ọ na-anọ n'akụkụ akụkụ nke aquarium ahụ, yana ọfụma ọfụma ọ dara ogbenye.
3. A na-ejide akụkụ nke aquarium ahụ, a na-ejedebe ohere itinye oriọna.
4. Oké mkpọtụ
Nke elu nyo na-atụ aro ikwu na ndị na-esonụ
1. Aquarium kachasị mejupụtara azụ na oporo
2. Akwarium nwere nnukwu azu dika isi aru
A naghị akwado iji ihe nzacha elu maka ọnọdụ ndị a
1. okporo osisi VAT
2. Ndị ọrụ na-elekọta mkpọtụ
Ihe mpụga iyo kwụsịtụrụ nyo unit na n'akụkụ ma ọ bụ n'elu. A na-agbanye mmiri ahụ n'ime tankị nzacha site na mgbapụta submersible, kpochara site na ihe nzacha ahụ, wee banye n'ime akwarium.
1. Ọnụ ala
2. Obere obere, dị mfe ịtọ
3. Ọ naghị anọ n’elu oghere aquarium ahụ, nwekwa ohere itinye oriọna dị ukwuu.
4. Ọ dị mfe ịmịkọrọ ikuku oxygen
1. Mmetụta nzacha na-adịghị mma
2. Contactkpọtụrụ ikuku ọzọ, carbon dioxide dị mfe ịlafu
3. Na ọkwa mmiri dị iche iche, a na-enwekarị ụda ntapu
4. Ihe nzacha dị mkpa ka a gbanwee site n'oge ruo n'oge.
A na-eji ihe nzacha mpụga maka nyocha ndị a
1. A na-eji ya dị ka akwarium maka ịzụlite obere osisi mmiri na azụ azụ dị n'okpuru 30cm
2. Ndị ọrụ chọrọ ịchịkwa ọnụ ahịa
A naghị atụ aro ihe nzacha mpụga maka ọnọdụ ndị a
Nnukwu na ọkara siquarium
Wuru na nzacha
Isi ihe ntanetị nke ọkụ ọkụ
2. Ntọala dị mfe
3. Ojuju oxygen zuru oke
4. Etinyela ya na akwarium ma ghara iburu oghere dị na mpụga
Advantkọ ihe ụfọdụ nke wuru na-iyo
1. Naanị dabara maka obere akwarium
2. Mmetụta nzacha na-adịghị mma
3. Enwere ụda mkpọtụ
4. Ihe nzacha dị mkpa ka a gbanwee ugboro ugboro.
5. Ọ na-emetụtakwa ịma mma nke akwarium
A na-atụnye ihe ntanetị n'ime ọnọdụ ndị a
Wuru na nzacha na-adịghị atụ aro mgbe
Akwarium karịrị 60 cm
Ogbo nza (mmụọ mmiri)
Ogbo nza bụ ụdị ihe nzacha nke chọrọ ijikọ mgbapụta oxygen na eriri ikuku, nke nwere ike ịmịnye ya na mgbidi akwarium. Ọ na-adịkarị mma maka obere cylinders na nwekwara ike-eji dị ka inyeaka nzacha maka ọkara-sized cylinders.
Principlekpụrụ bụ iji mmetụta nke mmịpụta mmiri mgbe afụ na mmiri na-abawanye, nke nwere ike ịmịkọrọ nsị na ihe idide azụ. Tụkwasị na nke ahụ, nje ndị dị na owu na-edozi ahụ nwere ike ire ere nke ọma, si otú a nweta nzube nke biofiltration na obere oghere.